Patreon ရွယ်ရောက်ပြီးသူအားကစားပြိုင်ပွဲတော့တစ်ဦးမဟုတ်ဘဲထူးခြားသောအယူအဆ၌ကားအာကာသ:ကျွန်တော်တို့ပေးပို့ဖို့ကြိုးစားနေလူမျိုး၏နောက်အဆင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပျော်ရွှင်မှုများနှင့်ပျော်မွေ့ခြင်းအားဖြင့်တင်ပြသူတို့နှင့်အတူရွေးချယ်စရာသူတို့ဖွယ်ရှိထင်ဘယ်တော့မှမဖြစ်နိုင်ပါ။ ကြည့်ပါ၊အဲဒီရဲ့ကြီးမားတဲ့ဒေတာဘေ့စရှိပါတယ်ထွက်မြှုပ်နှံဖို့အပူဆုံးဂိမ်းလူကယ့်ကြောင့်မေတ္တာနှင့်ထောက်ခံမှု:Patreon။, နှောင့်ရှက်သည်၊အဘို့အတွေအများကြီးကိုခေါင်းစဉ်၊သင်သည်ဆပ်ဖို့ရှိသည်ကြီးမားငွေသားပိုက်ဆံရနိုင်ရန်အတွက်ဝင်ရောက်ခွင့်၊သို့မဟုတ်အသြင္းအတွက်လစဉ်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုစနစ်အကြောင်းပိုပြီးမကြာခဏမထက်ကြာလာမှအနှစ်အဖြစ်အကျိုးခံစားရရှိရေးသည်အမှန်မှန်တွန်းပြန်ပြောင်းခြင်းနှင့်လိုအပ်ချက်များကိုပိုပြီးငွေရှာဖို့ပြီးပြည့်စုံသည်အဘယ်အရာကိုသူတို့လုပ်နေ။ မှာ Patreon ရွယ်ရောက်ပြီးသူအားကစားပြိုင်ပွဲ၊ကျွန်မတို့ဟာသင့်ကိုယ်စားလုပ်ဆောင်ကြောင်းဒါကြောင့်သင်အကျိုးကျေးဇူးများလုံးကိုဖြစ်ခြင်း၏နာယက၊ဒါပေမယ့်ရန်လိုအပ်ကြောင်းမပါဘဲအမှန်တကယ်တက်လက်မှတ်ထိုး–သို့မဟုတ်လက်ကျော်ငွေသား–ဒါကြောင့်သင်ရုံအပေါ်အာရုံစူးစိုက်ရတဲ့အဂိမ်းများနဲ့အခြား။, ကျွန်မတို့ဟာလေသန့်သဘောတူထားနှင့်အတူတက်အကောင်းဆုံးခေါင်းစဉ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်သည်သူတို့အားလုံးမှာအဘယ်သူမျှမမေးသောမေးခွန်းများ! ပိုမိုလေ့လာသင်ယူရန်၊အစုံဖတ်အောက်တွင်ချမယ်ပြေးမှတဆင့်သင်ဘယ်လို Patreon ရွယ်ရောက်ပြီးသူအားကစားပြိုင်ပွဲရဖို့စီမံခန့်ခွဲရန်နေရာနှင့်၊ထို့အပြင်အတွက်၊အသေးစိတ်များအတွက်လာမည့်ဆိုတာဘာလဲကျွန်ုပ်တို့အသိုင်းအဝိုင်းနှင့်မည်သို့ဖြစ်လာနိုင်၏အစိတ်အပိုင်းအားလုံး။ သံကဲ့သို့အစီအစဉ်တစ်ခု။ ထို့နောက်ဆက်လက်ပေါ်!
ကြည့်ရှုပါ:ကျွန်တော်တို့သိတူအသံအနေနဲ့လုံးဝအရူးအရာ၊ဒါပေမယ့် Patreon ရွယ်ရောက်ပြီးသူအားကစားပြိုင်ပွဲပေးသည်မှဝင်ရောက်ခွင့်ခေါင်းစဉ်ကျနော်တို့တာဝန်ခံလုံးဝအခမဲ့။ ဘယ်လိုလုပ်ဒီလုပ်၊အတိအကျ? ကောင်းစွာ၊ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှာကြီးမားတဲ့အရေအဖွဲ့ဝင်များလာသောသူအားဖြင့်ဤနေရာကိုဖန်တီးအကောင့်အသစ်များ၊ကျနော်တို့လစာကိုတစ်လျောက်ပတ်သောအမျိူးပြောင်းအလဲ၏ဖြစ်ဆောင်ရွက်မှတစ်ကြေးမုံအတွက်၎င်းတို့၏ခေါင်းစဉ်။ ဒုတိယအကြောင်း၊ငါတို့သည်လည်းအရေအတွက်ရှိပွန်ချင်သောသီးသန့်သုံးစွဲခွင့်ညမ်းဂိမ်းကစား၊ဒါကြောင့်ကျနော်တို့ရောင်းချရန်ကြော်ငြာခြင်းအပေါ်ဘက်မှကူညီဆောင်ခဲ့နှင့်အတူအကြီးကောင်။ စေသည်အများကြီးကျပါတယ်၊လက်ျာ?, Patreon ရွယ်ရောက်ပြီးသူအားကစားပြိုင်ပွဲသည်မြတ်စွာဘုရားကိုဖူးမှတစ်လျောက်ပတ် bankroll အခုအချိန်မှာနေစဉ်ကျနော်တို့ထွက်ပေးဆောင်ထက်ပိုရ၊အနာဂတ်စီမံကိန်းနှင့်အတွေးအခေါ်မှာပိုက်ကျော်ကိုလာမယ့် ၁၂ လအမည်ရပြီးအစိမ်းရောင်လိုဘဲယဇ်ပူဇော်ဖို့မည်သည့်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုလုံးအတွေ့အကြုံသင်ဖို့အသုံးပြုနေတာပါ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်၊အားလုံးသင်အမှန်တကယ်သိရန်လိုအပ်ကြောင်းအရာတွင်ပေါ်မှာ Patreon ရွယ်ရောက်ပြီးသူအားကစားပြိုင်ပွဲအကြောင်းရိုးရှင်းသောတကယ်တော့သင်ရ ၅၀ ကျော်သန့် Patreon ဂိမ်းခံစားဖို့ပေးဆောင်ခြင်းမရှိဘဲသူတို့အဘို့။ ရဲ့ချိုမြိန်၊မှန်သော? အိုး၊တန်ခိုးအာနုဘော်ပါဘူးအဲဒီမှာကျွန်တော့်ကိုရပ်တန့်–ဒါအများကြီးပိုပြီးထက်မြက်လာရန်သင်၏လမ်း!
တဦးတည်းကြီးမားတဲ့ပြဿနာများနှင့်အတူ Patreon ခေါင်းစဉ်အကြောင်းသူတို့မကြာခဏလိုအပ်၊သင်ကသူတို့ကိုထည့်သွင်းရန်ဂိမ်းစနစ်၏၊သောဖန်တီးနိုင်လျှင်အဆိုပါညွှန်ကြားချက်များမဟုတ်ကြောင်းရှင်းလင်း။ Patreon ရွယ်ရောက်ပြီးသူအားကစားပြိုင်ပွဲစီမံခန့်ခွဲဖို့ထွက်ခုတ်ဖြတ်ဒီလိုလုပ်ခြင်းအားဖြင့်တဦးတည်းကအရမ်းအေးမြသောအရာ:ပေးကမ်းဖို့စွမ်းရည်ကိုရှေ့ဆက်သွားနှင့်ကစားအဘယ်အရာကိုကျနော်တို့ရှိသည်ဖြင့်။။။။။, အဓိကအကြောင်းရင်းမှာသင်ဖြစ်သင့်၏ဂိမ်းများကိုပျော်မွေ့နိုင်ပါကြောင်း Patreon အုပ္ဆုိင္ကြမရှိဘဲအပြေး၏အန္တရာယ်ရှိခြင်းပေါ်ရှိဗိုင်းရပ်စ်ပိုးသင့်စနစ်သို့မဟုတ်၊တနည်းအားဖြင့်၊လိုအပ်စောင့်ဆိုင်းရန်အချိန်အကြာကြီးအဘို့အကအားလုံးကိုရဖို့ရန်ဒေါင်းလုတ်ရန်အလို့ငှာစတင်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ယိုအစာကျွေးဖို့ဒေတာသင့်ရဲ့စနစ်မှတဆင့်တိုးတက်မှုအဖြစ်၊ပိုင်ဆိုင်မှုဝန်အဖြစ်နှင့်လိုအပ်သောအခါ၊အနက်အဓိပ္ပာယ်လျှင်သင့်ရဲ့ဆက်သွယ်မရှိအကြီးမြတ်ဆုံး၊သင်ဆဲရနိုင်စဂိမ်းအပေါ်မပါဘဲတူခံစားလိုသုံးဖြုန်းဖို့တစ်နာရီသို့မဟုတ်နှစ်ခုကြောင့်ဒေါင်းလုပ်ဆွဲ။, ဤသည်ကိုလည်းကောင်းကဲ့သို့သင်တို့ခံစားရပါလျှင်ဂိမ်းဖြစ်စေခြင်းငှါ၊ကောင်းပြီ၊ဒါပေမယ့်ချင်ကြပါဘူးအဖမ်း ၁၀ တိုးျဖိုင်ထွက်ရှာဖွေနိုင်ဖို့အတွက်။ Patreon ရွယ်ရောက်ပြီးသူအားကစားပြိုင်ပွဲပေးသည်သင်ရွေးချယ်စရာနှင့်စွမ်းရည်ကိုကစားရန် ၅ မိနစ်အဘို့ဖြောင့်လင်းနို့ပယ်ခြင်းနှင့်သင်ကမကြိုက်ဘူးလျှင်အဘယ်အရာကိုကျနော်တို့ပြီ၊ဒိန်းမတ်ပယ်ထား–မညှဉ်းဆဲ၊အဘယ်သူမျှမပုပ်။ ဒီစကိုဆိုလိုတယ်ဒီဂိမ်းကစားရန်တတ်နိုင်ကြသည်အပေါ်ချိတ်ဆက် MacOS နှင့် Linux စနစ်များ:ဤမျှကာလပတ်လုံးအဖြစ်သင်ရှုပြေး၊မြေခွေးသို့မဟုတ် Chrome၊သငျသညျသှားဖို့ကောင်းသောင့်။
၏နောက်ထပ်အကျိုးကျေးဇူး Patreon ရွယ်ရောက်ပြီးသူအားကစားပြိုင်ပွဲဖြစ်သောအခါအသစ်ထေးပတ်ပတ်လည်လှိမ့်၊သငျသညျဖို့လိုအပ်တော့မှာမဟုတ်ပါဘူးအမင်းကိုယ်အားဖြင့်ကျော်ရှိခြင်းမှသူတို့ကိုဒေါင်းလုဒ်ဆွဲ–သို့မဟုတ်စစ်ဆေးသောသူတို့လိုအပ်ဒေါင်းလုပ်လုပ်ခံရဖို့ပထမဦးဆုံးအရပျ၌။ ကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးဂရုစိုက်သောသင်တို့၏ကိုယ်နှင့်ဂတိတော်ကိုတွန်းအားပေးအသစ္မ်ားဂိမ်းများကိုချစ် ၂၄ နာရီအတြင္း–၇ ရက်ပေါင်းတစ်ပါတ်! ဒါဟာသင်နောက်ဆုံးပေါ်နှင့်အကြီးကျယ်ဆုံး၊ဒါကြောင့်ကျွန်မတို့ဟာမယုံနိုင်လောက်အောင်နှိမ့်ချခြင်းနှင့်ကျေနပ်ဘယ်လောက်ကြည့်ဖို့ကောင်းစွာလက်ခံရရှိဒီဆုံးဖြတ်ချက်နှင့်လုပ်ငန်းစဉ်သိရသည်။, Patreon ရွယ်ရောက်ပြီးသူအားကစားပြိုင်ပွဲဘယ်တော့မှလိမ့်မည်လိုခံစားရတာလဲခဲယဉ်းကြိမ်ပေါ်အတိုင်းအဆိုပါဂိမ်းကစားဖို့ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုပြသသောအဘယ်အရာကိုကျနော်တို့ကလုပ်နေပါတယ်တန်ဖိုးနှင့်အစဉ်အမြဲအရေးပါသည်။ အို၊ကျွန်တော်အဆက်မပြတ်ရှာဖွေနေများအတွက်အသစ်ဂိမ်းများတွန်းအားပေးရန်နှင့်မြှင့်တင်လွန်း၊ဒါကြောင့်သင်တို့အားချင်ပါတယ်လျှင်သင်ကအမြင်ခေါင်းစဉ်ထည့်သွင်းအတွက်ဒေတာဘေ့စ၊ယခုထွက်ရောက်ရှိဖို့ပြီးနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့နှင့်အတူထိတွေ့ရယူပါအတွက်စာရင်းသွင်းလျှင်ကြည့်ဖို့နိုင်အောင်သင့်ရဲ့စိတ်ကူးယဉ်အဖြစ်မှန်။
ကြည့်ဆွေ–ကျွန်မအမေလည်းအချိန်အများကြီးဒီမှာသီချင်းဆိုခြင်းချီးမွမ်း၏Patreon ရွယ်ရောက်ပြီးသူအားကစားပြိုင်ပွဲနှင့်သင်ပြောပြအရာအားလုံးကို peachy။ အဲဒီအစား၊ငါအများကြီးကြိုက်ကြောင်းသို့ရောက်သောနိဂုံးကိုယ့်ကိုကိုယ်အားဖြင့်၊အရာအတော်လေးလွယ်ကူသည်ပြုပြီးနောက်သင်တက်လက်မှတ်ထိုးဘို့အအခမဲ့အကောင့်နဲ့အတွေ့အကြုံအပြည့်အဝဒေတာဘေ့စကိုယ့်ကိုကိုယ်အဘို့အ။ အချက်အလက်များကိုရေးကြသည်သောဤအထူးသီးသန့်နှင့်မူထူးခြားတဲ့ချဉ်းကပ်မှုညမ်းဂိမ်းကစားခြင်းအဖြစ်ရှုမြင်ခံရဖို့ယုံကြည်။, ကျွန်တော်တို့မထုတ်ပါဘူးဘာမှမယျ၊ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့ထုတ်ပြန်အချို့အကောင်းဆုံးရွေးချယ်စရာထွက်ရှိစျေးကွက်အပေါ်အခုအချိန်မှာထင်ကျေးဇူးပြုပြီးအများကြီးတစ်ငရဲ၏ဂိမ်းကစားခြင်းအားဖြင့်အဲဒီလိုလုပ်ခြင်း။ ယခုအခါ:အမှောင်ဘက်ခြမ်းကိုကိုယ်အဘို့မြင်င့်အဘယျသို့ဤမျှလောက်ကြီးစွာသောကြောင်း Patreon ရွယ်ရောက်ပြီးသူအားကစားပြိုင်ပွဲ? ထိုအခါကျေးဇူးပြုပြီး၊ဒါကြောင့်ဒီအလွန်လက်ငင်း!